बोनेयर: द बेस्ट क्यारिबियन द्वीप | सडकको लागि एक युगल
सुन्दर बोईयर: बेस्ट कैरेबियन गोप्य
फरवरी 8, 2017 /7टिप्पणिहरु
बोनायर साँच्चै एक अज्ञात हीरा हो, राम्रो तरिकाले, यति धेरै सुन्दर हीरा को एक झरना। तथापि, बोनायर अनूठा छ कि यो एक अति संतृप्त संसारमा एक प्रकारको अचम्मको स्वर्ग बन्छ।
कम से कम एबीसी द्वीपहरु को यात्रा (जसलाई बोएरर अरुबा र काराकाओ संग बनाइन्छ), यो बस चुपचाप देखि भेनेजुएला को उत्तर क्यारिबियन मा छ। यो सानो टापु नृत्य एक स्नोर्कलिंग र गोताखोरी प्रहार हो, साथै मैले अहिलेसम्म सबै भन्दा जेनियल र हार्दिक ठाउँ मध्ये एक छ।
उष्णकटिबंधीय संसारको यस विशेष भाग धेरै आश्चर्य, समुद्र को एक विशाल र प्रभावशाली विस्तार छ कि यात्रीहरु लाई विश्व भर मा प्रवेश गर्दछ। यस इतिहासको रहस्यहरू पुरानो र नयाँ दुवै हो, त्यसैले यो कुनै आश्चर्य छ कि क्रिस्टल स्पष्ट पानीहरू बीच समावेश एक स्नोर्कलिंग र डाइभिङ्ग स्वर्गमा बस्न सक्दछन् तपाईले पनि बारेमा सुन्नु भएको हुन सक्छ; अङ्गुबाको नजिकै एक द्वीप तपाईं 30 मिनेट भन्दा कम र यसलाई 15 मा काराकाओमा हावा द्वारा पुग्न सक्नुहुनेछ!
सेतो रेत र नारंगी-सुन सुनको यो जगमा मेरो हृदयमा विशेष ठाउँ छ। बच्चाको रूपमा मेरो दादापट्टिहरू बोनीमा मिशनरीहरू थिए, अझै पनि परिचालन ट्राभल वर्ल्ड रेडियो स्टुडियोमा स्वयंसेवक। मलाई बोयारेमा केही छुट्टिहरू खर्च गर्न आशिष् थियो। मेरो पहिलो एकल अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा अनुभव गरिसकेपछि उनी तेरह वर्षको हुँदा उत्तरपूर्व अमेरिकामा मेरो घरबाट भेट्न आए।
त्यस पछि देखि, बोनायर ले धन्यवाद धेरै परिवर्तन गरेन। यो टापुले शान्तिलाई सुरक्षित बनाउँछ, यो पहिचान छ, र यो गर्मी हो। वर्ष बित्न सक्छ, तर मानिसहरूको संस्कृति र आत्मा कहिल्यै ठूलो देखि ठूलो संसारको जस्तो चलिरहेको तनावले प्रभावित हुन सक्दैन।
सुन्दरता र समुद्र तटहरू
बोनायर लामो समयदेखि व्यावसायिक विविधताका लागि एक केन्द्र हो जुन डच अवकाशदाताहरू, यसको स्पष्ट पानी र पछाडि राखिएको मनोवृत्तिले विश्वभरबाट विवेकशील साहसीको लागि आकर्षक आकर्षणलाई घृणा गर्दछ, जबकि अझै पनि अधिकांश यात्रुहरूको लागि आभासी रहस्य छ।
एबीसी द्वीप समूह र भाग को रूप मा Leeward Antilles (पहिले नीदरल्याण्ड एन्टिलेज), बोनायरले दशकौंका लागि लक्जरी पर्यटकले ठूलो मात्रामा पर्यटन बाट अचम्म लागेका लक्जरी थिए। केवल 24 माइल लामो, Bonaire शीर्ष रेटेड स्नोर्कलिंग र क्यारिबियनमा स्कुबा डाइविंगको रूपमा बस्छ। यो निरन्तर महासागर शान्तिले रित्तोहरूको निजी र सरकारी संरक्षण दुवैलाई सावधानीपूर्वक राखिएको छ, जसलाई 1979 पछि बोनरलाई स्वर्ग बनाइन्छ।
त्यहाँ सेतो स्यान्डी समुद्र तटको धेरै सुन्दर भागहरू छनौट गर्नका लागी, स्नोर्कलिंग वा डाइविङ्गको लागि लगभग सबै आदर्श, यस टापुको उत्तरपूर्वी भागको अपवादको साथ जहाँ लहरहरू र धाराहरू एक पल मा आफ्नो खुट्टा बन्द गर्न पर्याप्त छन्!
द्वीपको दक्षिणपूर्वी मा स्थित, सोरोबोन बीच स्नोर्कलिंग र स्विमिंग को लागि एक सुन्दर स्थान हो, साथ नै बस सूर्य मा आराम। क्यारिबियनमा सबैभन्दा उत्तम समुद्र तट मध्ये एक, तपाई यहाँ एक उष्णकटिबंधीय ककटेलको साथ लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ र विश्व-कक्षाको windsurfers लाई हेर्नुहुन्छ जुन अक्सर सर्बोनमा लहरहरू हिउँदछ।
यहाँ स्थित सोरोबोन समुद्र तट रिजर्ट र प्रसिद्ध र मजा Hang Hang Beach Bar हो, 1988 पछि राम्रो समयको लागि एक धेरै मनपर्ने Bonaire स्थापना।
बैचलरको समुद्र तट
सेतो रेतीले समुद्र तटको सानो सानो किनारा बेल्नम जिल्लामा स्थित छ, सजिलै संग मात्र हवाई अड्डाको दक्षिण। छोटो 10 पैदल चट्टानको तलमा बस्दै, तपाईं सीढ़ीको माथिको छेउमा बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको बाटोलाई यो धनात्मक र आकर्षक स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो खिंचाव, धेरै बोने समुद्र तटहरु जस्तै, स्नोर्कलिंग र डाइविंगको लागि एकदम सही छ।
चरणहरू केवल सडक र सजिलो बन्द छन्, र पानीको द्रुत निकास। स्थानीयहरूले तपाईंलाई भर्खर अन्तिम चरणहरूमा आफ्नो खुट्टा हेर्नको लागि सल्लाह दिन्छ जहाँ समुद्री स्प्रे हुन सक्छ यो चिन्ह!
यो बोयनियन स्थानीयहरूको मनपर्ने मध्ये एक हो, हरेक शब्दको शब्दमा आराम गर्न समय बिताउने एक ठाँउ हो - एक तान्न पाउनुहोस्, तैरना लिनुहोस् र त्यसपछि पकाउनुहोस्! यति धेरै अन्य बोने समुद्र तटहरू जस्तै, समुद्र जीवन प्रचुर र सुन्दर छ, र केवल किनारबाट टाढा एक स्नोर्केल। दिनको निश्चित समयमा त्यहाँ स्थानीय मनपर्दो रोकिएको छ - काइट सिटी खाना ट्रक, जसले स्वादिष्ट ताजा मासु व्यंजनको काम गर्दछ!
बोनेयर धेरै तरिकामा एक अनोखी टापु हो - जसमध्ये एक जंगली गधाहरूको प्रसार हो जसले स्थानीय (साथै जंगली) क्षेत्रहरूमा घुमाउँछ। यद्यपि यो समुद्री किनारको भ्रामक हुन सक्छ, यो एक स्थानीय मनपर्ने, स्विमिंग र स्नोर्कलिंग सबै चीजहरूको लागि एक लुटेच्छाजनक स्थान हो।
यो लोकेल दुवै आगन्तुकहरू र लगातार समुद्र तट वरिपरिका लागि समान हुन्छ, किनकि सप्ताहांत संगीत, पारिवारिक मजा र राम्रो भेबका वातावरणमा जीवंत स्थानीय स्थान बन्न सक्छ!
क्लेन बोनियर (नाम नाम बीच)
मुख्य टापु मा लोकप्रिय समुद्र तट स्थान को अतिरिक्त, क्लेन बोनेयर एक सानो, अप्रत्याशित द्वीप सिर्फ 15 मिनेट दूर छ। Kralinijk देखि क्लेननेजक देखि क्लेन बोनेयर सम्म जाने को सबै भन्दा तेज तरीका कार टैक्सी द्वारा कैरिब Watersport मार्फत, एडेन रिजर्व बीच समुद्र तट क्षेत्र मा स्थित क्लेन बोनेयर देखि बस मा स्थित छ। क्लिन बोनरको अप्रत्याशित किनारेमा तपाईंले आफूलाई "नो नाम नाम बीच" पत्ता लगाउनुहुनेछ, अविश्वसनीय नरम, सेतो बालुवाको खिचो र यो किनारा किनारमा लैजाने यो हस्ताक्षरको नीलो पानी। तपाईंको आफ्नै स्नोर्केल गियर ल्याउने निश्चित गर्नुहोस् (भाडामा रिसोर्टमा पनि उपलब्ध छन्!), किनकि यो समुद्र तट सबै कौशल स्तरको स्नोर्केलर्सहरूको लागि आदर्श छ किनकी उर्वरहरू सजिलैसँग नेभिगेबल हुन्छन् र पानी शान्त हुन्छ। कुनै नाम समुद्र तट सबै बोनेयरको सबैभन्दा सुन्दर समुद्र तट मध्ये एक हो, र एकले तपाईंलाई किन्न सक्ने प्रकार ल्याउनेछ।
तथापि, पनि एक थर पानी र नाश्ता साथ ल्याउन सुनिश्चित गर्नुहोस्, किनकि क्लेन बोनेयर शब्द को हरेक अर्थ मा विभेद छ! त्यहाँ कुनै पेय फव्वारे वा विक्रेताहरू छैनन्, त्यसैले तपाईले सोच्नुहुन्छ जुन तपाईलाई मुख्य भूमिबाट आवश्यक पर्दछ। सौभाग्य देखि यो केवल एक पन्द्रह मिनेट को नाव प्रत्येक तरिका को सवारी र टैक्सी यात्री र हरेक जोडी को यात्रा को छ। समुद्र तट मा, एक सानो पर्वतीय क्षेत्र हो जहाँ तपाईं पानी या sunbathing मा केहि छाया पकड सकते हो, तर उस सनब्लक को काम को बनाए राखन को लागि!
यो विशेष क्षेत्र हाम्रो मनपर्ने मध्ये एक हो, स्यान्डी स्याउलाइटिङ क्षेत्रहरूको बावजूद। बुद्धy गोता हामीले टापुमा देखेका सबै भन्दा अचम्मको स्नोर्केल र स्कूबा क्षेत्रहरू छन्। त्यहाँ एक पोखरी क्षेत्र र आरामका लागि धेरै सुन्दर ठाउँहरू छन्।
सुन्दरताको अतिरिक्त, तपाईं दिनको लागि एक पनरोक क्यामेरा भाडामा राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको हृदयको सामग्रीमा तैरें, र त्यसपछि उनीहरूले तपाईंले लिनुभएको प्रत्येक तस्बिरको डिस्क दिनुहुनेछ! यस विशेष ठाउँ मा माछा को विभिन्न प्रकार को सांस लेने वाला एक पल्ट जब तपाइँ मास्क मा राख्नु र सीढी को तल क्रिस्टल साफ पानी मा शुरू करो।
यस स्थानको लागि एक अतिरिक्त रेस्टुराँ रेस्टुरेन्ट हो जुन अद्भुत, ताजा खाना प्रदान गर्दछ, र तपाईं पानी देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि एक अगुआ आगन्तुक हुन सक्छ वा दुई को ताजा टमाटर वा लेट्सी स्क्रैप हेर्न। तपाईं तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिईन प्रोत्साहित गरिरहनु भएको छ, तर चिन्ता नगर्नुहोस् - तिनीहरू धेरै मित्र हुनुहुन्छ! हामी दुई पटक हाम्रो भाग्य लंच साथी सँग केहि स्क्रैपहरू डुब्यो!
बोनायरको सुन्दरता पनि यस तथ्यमा झल्किन्छ कि यो सादगी मात्र मात्र शान्ता बढ्छ। टापुमा दुईवटा मुख्य सडकहरू छन्, एक उत्तर र एक दक्षिण, जसले सजिलो नेभिगेसनको लागि बनाउँछ भने तपाईले त्यहाँ एअरपोर्टबाट कार भाडामा लिने छनौट गर्नुहुन्छ भने, यद्यपि यो सबै सक्रिय गतिविधिको नजिकको आवश्यकता छैन तपाईं मा चासो राख्नुहुनेछ।
सार्वजनिक यातायात प्रणालीको कमीको बावजूद, ट्याक्सीहरू धेरै सस्ता छन् र सधैं अनुकूल र बहुसंख्यक अंग्रेजी बोल्ने स्थानीयहरू द्वारा संचालित हुन्छन्। हाम्रो अन्तिम भ्रमणमा हामी विक्टर, एक अद्भुत संवाददाता र हाम्रो रिसोर्टमा सबैलाई मित्र संग धेरै पटक टापु वरिपरिका taxiing आनन्दित थियो!
यदि तपाईं आफ्नो दैनिक भागहरु मा आफ्नो कपाल मा अधिक वायु को खोज गर्दै हुनुहुन्छ भने, टापु को आसपास को पेडल को मौका को लागी सुनिश्चित गर्नुहोस कि दुवै मानक र सबै भू-भाग उपलब्ध हो, वा बिजुली बाइक मा तीव्र गति को अन्वेषण गर्नुहोस। स्कूटर बोनेयर वा बोनेयर इको साइक्लिङको जाँच गर्नुहोस् दिनको लागि तपाईंको दुई-पहेलो यातायात भाडामा। बोनायरले यो पर्यावरण-अनुकूल मोड यात्रालाई सोरोबोन, रिन्कोन र क्रेलान्डेजिको विल्हेल्मिना स्क्वायरमा निःशुल्क चार्जिङ पोर्ट प्रदान गर्दछ।
आइतबार आइतबार सूर्यको सूर्य
समुद्री जीवन र स्नोर्कलिङ भन्दा बाहिर, टापुमा सुन्दर रिसोर्ट्स सहित अवकाश खोज्ने कुनै ट्राभर्सरको लागी उत्साह गर्न निकै ठूलो छ अदनको र बुद्ध गोता, शहर Kralendijk को देर रातहरु को रात को बीच दुवै (एक मजेदार र उत्सव शहर अब सम्म पीटा पथ देखि छ कि हिज्जे को अझै सम्म उनको नाम को बुझन सक्दैन!)।
सबै Bonaire को शांत रिसोर्ट्स, साथै हलचल र मित्रवत शहर मा, विश्राम को लागि, ambiance र सुंदरता, साथ नै उत्साह को पूरा। कुनै पनि क्षणमा तपाईं आफैलाई पाइन कोलाडा पेन्डिङ, संसारको कुनै पनि चिन्ता, विलम्ब वा कार भुक्तानीबाट शुद्ध परिभाषामा पिउन सक्नुहुनेछ!
Bonaire मा रातो जीवन को लागि, तपाईं धेरै टाढा यात्रा गर्न हुनेछ यदि तपाईं एक सुन्दर रिसोर्ट्स मा बस एक शहर मा सडक देखि तल मा रहन। हामीले पाएका सबै भन्दा उत्तम मनोरञ्जन सप्ताहांत रात्रिभोज स्पाइस बीच क्लबमा छ, जुन पानीको एडेन रिजर्भेसनको भाग हो। स्वादिष्ट भोजन र धेरै उचित मूल्य ककटेल प्रस्तुत गर्दै, स्पाइस रोशनीहरू क्यारिबियनले हरेक हरेक क्याबानामा उठे शुक्रवार राति लाइभ संगीत, रोशनी र एक जेनियल पार्टी वायुमण्डल भएको छ जुन तपाइँले कम्तिमा केहि जोडीहरु पछि कम्तीमा 10 नयाँ साथीहरू बनाउनुहुनेछ।
नृत्य उत्साहका लागि, तपाईंको छनौटको हराउन धेरै विकल्पहरू छन्, लिटिल हवाना, केर्टलको बीचको बार, र प्लाजा रिसर्ट बोनेयर जसमा ल्याटिन राति हरेक हो। शनिवार साँझ। केवल एक द्रुत दर्ताको साथ, प्लाजा रिजोर्टले6बाट7सम्म निशुल्क साल्सा कार्यशाला प्रदान गर्दछ, जसको पछि तपाईं उनीहरूको भन्दा राम्रोसँग नृत्य गर्न सक्नुहुन्छ! यदि नृत्य तपाईंको कुरा होइन भने, डिभी फ्लेमिङोमा कैसीनोमाथि हुने टाउको, जहाँ तपाइँ टेबल र स्लटहरूमा तपाइँका कुञ्जीहरू पनि परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, हरेक रात ढिलो खुला आइतवार। तपाईले देख्न सक्नु भएको छ, बोनियरमा पनि एक लामो सप्ताहांतको लागि धेरै चीजहरू छन्!
बोनियरमा हुँदा, उनीहरूको स्थानीय मनपर्ने, अस्टेलको उज्यालो बियरको केहि (वा धेरै!) लाई पनि निश्चित बनाउनुहोस्। समुद्र तट र सूर्यको एक ताजा तातो, उज्ज्वल हरेक ठाउँमा सेवा गरिन्छ र उचित रूपमा मूल्य छ! यस हस्ताक्षर भित्री को वाहेक, द्वीप को नव निर्मित र आकर्षित "बोनी गोरा" को एक गिलास लिफ्ट, स्थानीय रूप देखि सामाग्री को सामाग्री संग बनाइएको एक हल्का र मसालेदार क्रेटर ब्रिज!
सबै मा, Bonaire मा रात्रिभोज रमाइलो छ, र रात को समय सम्म खुला छ, तपाईं पछि बदलन को लागी पनि लामो समय पछि!
साल्ट फ्लैट र फ्लेमिङोस
यस टापुको एक धेरै अनूठा पहलू यो हो कि, यसको भनाई आकार र अपरिहार्य जंगलको बावजूद, त्यहाँ विश्वको मात्र फ्लेमिङो अभिनयहरु मध्ये एक छ। पिक्सेलर फ्लेमिङो अभयारण्य सुन्दर गुलाबी पक्षीको लागि एक प्रजनन ग्राउण्डको रुपमा रहेको छ, नमक फ्लैटको कारण एक प्रमुख क्षेत्र जहाँ उनीहरूले आफ्नो नाकहरू बनाउँछन्।
अभयारण्य आगन्तुकहरूको अफलाइन सीमा हो, तर यस क्षेत्रमा (विशेषतया गुलाबी समुद्र तटको नजिकै) तपाईं कठोर हुन सक्नुहुनेछ र एक बगाई उडान ओभरहेर्नुको साक्षी नगर्ने। बोनीको फ्लाइङ्गोनेसले उनीहरूको आहारको कारण संसारमा केही गुलाबी हुने विशेष भेद राख्छन्, जुन लाल कारोटिनको साथमा छ!
त्यसोभए, उनीहरूको चिसो माथिल्लो पखेराहरू भन्दा माथि हेर्ने रूपमा हेर्नुहोस्, उनीहरूको सुन्दरता पूर्णतया देखि देख्न सकिन्छ जहाँ उनीहरूका मसी-काली पखेटाहरूको विपरीतको सट्टा प्रशंसा गर्न सकिन्छ किनकि तिनीहरूले माथि उड्ने गर्छन्।
बोनरको डिलिवरी एल्युल
त्यहाँ धेरै सुन्दर चीजहरू छन् जुन वर्णन गरिएको, यस खूबसूरत टापुको फोटो र सम्झन सकिन्छ। यदि तपाईंले यसलाई हेर्नको लागि मौका पाउनुभयो भने यो सबै मा लिनुहोस्! मान्छे को न्यानोपन र मित्रता देखि, ताजा भोजन मा, भूमि र सबै को सरासर सुंदरता सम्म क्यारिबियन समुद्रको प्रस्ताव छ, त्यहाँ यस संसारमा हुन सक्ने कुनै अनौठो अनुभव हुन सक्छ।
दशकौंको लागि छुट्याइयो, यो यति नै रहनेछ, यो यस अचम्मलाग्दो र जीवन परिवर्तन गन्तव्यको बारेमा मात्र एकदमै प्रिय र हृदयवाचक गुण हो।
श्रेणी: बोनेयर, क्यारिबियन, युगल यात्रा, खाद्य र पेय, सर्वाधिक लोकप्रिय टैग: समुद्र तट, bonaire, कार्बिबियन, डाइविंग, kralendijk, snorkeling
← अप्रत्याशित एम्स्टर्डम
समीक्षा: भेनिसको होटल वेसेलियो →
7 टिप्पणिहरु "सुन्दर बोईयर: बेस्ट कैरेबियन गोप्य"
बोनियर भ्रमण गर्नको लागि एक उत्कृष्ट स्थान हो। यस स्थानको बारेमा मलाई के प्रेम गरियो यसको जैव विविधता हो। तपाईंले धेरै राम्रो तरिकाले बोनेर राख्नुभयो।
फेब्रुअरी 17, 2017
धेरै धेरै धन्यवाद! यो एक महान प्रशंसा हो, र बोनी वास्तव मा एक अद्भुत स्थान र हाम्रो मनपर्ने स्थान मध्ये एक हो। यस पदमा के भन्नु भन्दा अगाडी बढि हुन सक्छ भन्ने कुरा धेरै अधिक छ - हामी पूर्ण रूपमा सबैलाई उनीहरूको जीवनमा त्यहाँ पुग्न सबैलाई सिफारिस गर्दछौं 🙂
यो जानकारीको लागि धन्यबाद। म वास्तवमा यस ठाउँको बारेमा आजसम्म कुनै जानकारी छैन। काममा एक मित्रले सिफारिस गरेको छ कि मेरो पति र म त्यहाँ एक यात्रा लिन्छु त्यसैले मैले केहि गुजारा गरेँ। यो पढ्ने धेरै भन्दा धेरै सूचनात्मक लेख हो। यो साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। म केही अन्य पोष्टहरू जाँच गर्न जाँदैछु! मेरो पति र म चाहन्छु जसरी यात्रा गर्न चाहन्छु ताकि ब्लग हाम्रो लागि फिटिंग गरिरहेको छ! 🙂
म यसको प्रशंसा गर्छु, ब्रिटानिका! बोनियर, यो विश्वास गर्नुहोस् वा होइन, सम्भवतः हाम्रो मनपर्ने स्थान हो जुन हामी कहिल्यै हौं। अद्भुत केहि कम यस बारे सुनेका छन्।
16 सक्छ, 2017
तपाईसँग त्यहाँको महान जानकारी। यो वास्तवमा तपाईंको पोस्ट पढ्ने पहिलो पटक हो।
म केहि हजुरआमाको लागि कैरेबियनको सही स्थानको लागि केहि अनुसन्धान गर्दैछु। यो ठाउँ मैले हेरिरहेको छु जस्तो देखिन्छ।
यो साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद। यहाँ जानकारी पचाउन मेरो समय लिनुहुनेछ।
धन्यवाद क्रिस्टीन, तपाईलाई खुसी लाग्यो!
साँच्चै सुन्दर स्थान। उत्कृष्ट सुझावहरू र सुन्दर वर्णन गरिएको। बाडेको मा धन्यवाद।
चिन्ता फ्रा Diavolo
देश नाश्ता Casserole
विभाग श्रेणी चयन गर्नुहोस्आवासअफ्रिकाएयरलाइन्सअमेरिकीअन्टार्कटिकाएपेटाइजरअर्जेन्टिनाआर्मेनियाकला र संगीतएशियाअष्ट्रेलियाअस्ट्रियाअजरबैजानब्याकप्याक गर्दैबेल्जियमबोलिभियाबोनेयरबोत्स्वानाब्राजिलनाश्ताब्रिटिशक्यालिफोर्नियाक्यारिबियनमध्य अमेरिकाचिलीचीनकोलम्बियायुगल यात्राक्रेडिट कार्डपरिभ्रमणक्युबापाकचेक गणतन्त्रदिन यात्राडेनमार्कमिठाईमिश्ररोजगारइङ्गल्याण्डयुरोपपरिवार यात्रामहिला यात्राफ्लोरिडाखाद्य र पेयफ्रान्सनि: शुल्क आकर्षणनि: शुल्क कुराहरूफ्रान्सेलीफ्रेन्चगिआनाजर्जियाजर्जिया (युरोप)जर्मनजर्मनीग्रीसग्रीकसमूह यात्राग्वाटेमालाअतिथि पोस्टहरूहवाईस्वास्थ्यहिस्पानिकइतिहासछुट्टी यात्राHondurasहोटलमानवअधिकारहंगेरीहंगेरीआइसल्याण्डइलिनोइसभारतभारतीयइन्डोनेशियाप्रेरणादायकलोवाआयरल्याण्डआइरिसइटालियनइटालीयात्रा कार्यक्रमजापानकेन्याभाषा सिक्दैLow Carbमडागास्करमुख्य मार्गमेनपैसा बनाउनुमलेसियामाल्दिभ्समैसाचुसेट्समेक्सिकनमेक्सिकोमिशिगनमिनी-ब्लगमिनेसोटामिसौरीमोनाकोमङ्गोलियामोरक्कोसर्वाधिक लोकप्रियमोजाम्बिकनामिबियानेदरल्यान्ड्सनेवादान्यूयोर्कन्यूजील्याण्डसमाचारउत्तर अमेरिकाउत्तर कैरोलिनानर्थ डकोटाओशिनियाओरेगनआउटडोरप्यारागुवापेंसिल्वेनियापेरुफिलिपिन्सफोटोग्राफीपोल्याण्डपोर्चुगलप्युर्तोरिकोव्यञ्जनहरुरिसोर्ट्ससमीक्षासडक यात्राहरूरोमानियारोमानियालीरूसरूसीसलादस्कटल्याण्डस्कटिशस्व सुधारएसईओसेचिलिसअतिरिक्त खानाएकल यात्रासुपदक्षिण अफ्रिकादक्षिण अमेरिकादक्षिण डकोटास्पेनखेलसुरिनामस्वीडेनस्विडिशस्विट्जरल्याण्डतान्जानियाप्रविधिटेनेसीपरम्परायातायातयात्रा ब्लगिङयात्रा बजेटिंगयात्रा सम्झौतायात्रा गियरयात्रा योजनाटुनिशियाटर्कीअसंगठितसंयुक्त राज्यसंयुक्त राज्य अमेरिकाउरुग्वेशाकाहारीभेनेजुएलावरमोंटभियतनामभियतनामीभर्जिनियावेल्सवाशिंगटनवासिंगटन डिसीविस्कन्सिनजाम्बियाजिम्बाब्वे
अभिलेख महिना चयन गर्नुहोस् जुलाई 2019 जुन 2019 2019 सक्छ अप्रिल 2019 मार्च 2019 फेब्रुअरी 2019 जनवरी 2019 डिसेम्बर 2018 नोभेम्बर 2018 अक्टोबर 2018 सेप्टेम्बर 2018 अगस्ट 2018 जुलाई 2018 जुन 2018 2018 सक्छ अप्रिल 2018 मार्च 2018 फेब्रुअरी 2018 जनवरी 2018 डिसेम्बर 2017 नोभेम्बर 2017 अक्टोबर 2017 सेप्टेम्बर 2017 अगस्ट 2017 जुलाई 2017 जुन 2017 2017 सक्छ अप्रिल 2017 मार्च 2017 फेब्रुअरी 2017 जनवरी 2017 डिसेम्बर 2016
अमेरिकी एशिया बार्सिलोना बियर bonaire जोडे डब्लुबिन england युरोप फ्लोरिडा खाना फ्रान्स जर्मनी greece छुट्टी होटल होटल आयरल्याण्ड इटाली लिस्बन लन्डन मेक्सिको मियामी संगीत न्यूयोर्क उत्तर अमेरिका बाहिर पेरिस पेरु नुस्खा व्यञ्जनहरु समीक्षा समीक्षा रोम santorini दक्षिण अमेरिका स्प्यान के कुराहरू यातायात यात्रा यात्रा गियर यात्रा योजना संयुक्त राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका vienna